अk्गकोरका मन्दिरहरू, कम्बोडियामा छक्क पर्छन् यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | कम्बोडिया, के हेर्ने
कम्बोडियामा सबैभन्दा लोकप्रिय र सुन्दर पर्यटन आकर्षण हो एk्ग्कोर मन्दिरहरू, एउटा ढु stone्गाको कम्प्लेक्स आर्द्र जgle्गलले लगभग निल्यो, हालको सिम रपको शहरदेखि टाढा छैन।
थाईल्याण्डको समुद्री किनार र खाडीहरूको बारेमा धेरै भ्यागुताहरू तर वास्तवमा यी हुन् कम्बोडियामा मन्दिरहरू तिनीहरू शानदार छन्, र यदि तपाईंलाई इतिहास र पुरातत्व मन पर्छ भने, संसारको यस भागमा यसभन्दा राम्रो गन्तव्य अरू कुनै छैन।
2 Angkor का मन्दिरहरूको भ्रमण गर्नुहोस्
एk्ग्कोर संस्कृतबाट शब्द हो जुन पुरातन भारतको भाषा हो जुन कम्तिमा 3, 500,०० वर्ष पुरानो हो। आज यो हिन्दू धर्मको liturgical भाषा हो र बौद्ध पदहरूमा पनि अक्सर देखा पर्दछ।
Angkor शहर पुरानो Khmer साम्राज्य को राजधानी थियो त्यो XNUMXth औं र १ centuries औं शताब्दीको बीचमा फस्टाएको छ र त्यो विन्दुमा एक धेरै जनसंख्या भएको शहर थियो। यो आर्द्र र उष्णकटिबंधीय ज forest्गलमा छ, सीम रीप सहरको नजिक, उही नामको प्रान्तमा। गणना गरिएको छ हजारौं मन्दिरहरूतिनीहरू थोरै छैनन्, र ती हरियो चराहरू र धानका खेतहरू बीचबाट देखा पर्नको लागि यो प्रभावशाली छ।
आधुनिक पुरातत्वले धेरैलाई बेपत्ता पारेको छ किनकि यस्तो आर्द्र स्थानमा र बढ्दो वनस्पतिहरूको साथसाथै समय बित्दै जाँदा यसले उनीहरूको हाँगा, जरा र पातहरू माझ खाइरहेको छ। अर्कोतर्फ, युनेस्कोले एk्ग्कोर वाट र एor्ग्कोर थोम दुवैको भग्नावशेषलाई यसको संरक्षण अन्तर्गत राख्यो विश्व सम्पदा.
दस बर्ष भन्दा बढी पहिले र उपग्रह छविहरूको सहयोगमा यो पत्ता लागेको छ Angkor संसारको सबैभन्दा ठूलो पूर्व औद्योगिक शहर थियोमन्दिरहरू र सहरी क्षेत्रहरूको वरिपरि, जनसंख्याको लागि पानी नेटवर्कसँग र जमिनहरू फोहोरका लागि जुन मानसून अहिलेको दिनको क्रम हो।
यो देखिन्छ कि सत्रौं शताब्दीतिर ए around्ग्कोर वाट अझै पूर्ण रूपमा परित्याग गरिएको थिएन, जुन पुर्तगाली अन्वेषक वा त्यस क्षेत्रका जापानी बसोबासहरूले खुलासा गरे, र उन्नाइसौं शताब्दीमा पनि यो भग्नावशेष स्थानीय जनतालाई थाहा थियो र केही युरोपियनहरूलाई देखाइएको थियो जो त्यहाँ थिए। र तिनीहरू यति प्रभावशाली थिए कि पुनर्स्थापना कार्यहरू २०ौं को सुरूमा शुरू भयो फ्रान्सेली व्यक्तिहरूको समूहको साथ हातमा।
कार्यहरू दशकौंसम्म जारी रह्यो र यो एक ठूलो परियोजना थियो, त्यसैले तिनीहरूले भर्खरै १ 1993 XNUMX। को अन्तमा समाप्त गरे। के तपाईंलाई थाहा छ केही मन्दिरहरू ढु stone्गाले भत्काइएको ढु concrete्गाले बनिएका थिए र उदाहरणका लागि कंक्रीटका जगहरूमा पुन: एकत्रित गरियो। परिणाम प्रशंसनीय छ र यही कारणले गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटकहरूको संख्या धेरै बढेको छ र वरपरको होटेल र रेष्टुरेन्टहरू देखा पर्न थालेका छन्।
यो अनुमान छ कि त्यहाँ एक बर्ष दुई लाख पर्यटक र त्यो प्राचीन Angkor साइट को लागी धेरै छ। दुर्भाग्यवस समस्या अहिलेसम्म समाधान गरिएको छैन।
Angkor का मन्दिरहरूको भ्रमण गर्नुहोस्
पहिले तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि तपाईले पास, किन्नु पर्छ Angkor Pass, Angkor पुरातात्विक पार्क मा मन्दिरको भ्रमण गर्न। तपाईं यसलाई मुख्य प्रवेशद्वारमा वा Angkor Wat को सडकमा किन्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ एक दिन, तीन-दिन र सात-दिन पासहरू छन्। तिनीहरू लगातार दिनमा प्रयोग गरिन्छ।
साइट बिहान5देखि साँझ open सम्म खुल्ला तर केहि स्थानहरूको फरक समय हुन्छ, त्यसैले तपाईं कुन मन्दिरहरू याद गर्न चाहानुहुन्न र सुरु हुनुभन्दा अघि तिनीहरूको घण्टा जान्न चाहानुहुन्न भनेर पहिले नै यो जान्न सजिलो हुन्छ। सम्म, केहि स्थानहरुको छुट्टै टिकट छ, बेन्ग मेलेया नोम कुलेन जस्ता।
यो मूलतः भ्रमणको बारेमा हो Angkor वाट, Angkor Thom, बाकong, बाक्से चमक्रोंग, बन्तेय सम्रे, बेयन मन्दिर, प्रेह को, हात्तीहरूको टेरेस, र नोम कुलेन, केहि गन्तव्यहरू मात्र नामकरण गर्न। क्षेत्र विस्तृत छ, किलोमिटर र किलोमिटरको, र धेरै छन् मन्दिर परिसरहरू केवल एक मन्दिर भन्दा बढी।
Angkor Wat यो शानदार छ र धेरैले विचार गर्छन् कि यो इजिप्टको पिरामिडको उचाईमा छ। यो सिएम रीप शहरको छ किलोमिटर उत्तरमा र Angkor Thom को दक्षिणमा अवस्थित छ। तपाईं केवल पश्चिमी द्वारको माध्यमबाट प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो १२ औं शताब्दीको उत्तरार्धमा निर्माण गरिएको थियो र यो अनुमान गरिएको छ कि कार्यहरू तीन दशकहरू सम्म चले। यो एउटा भगवान विष्णुलाई समर्पित मन्दिर y यो जटिल मा सबै भन्दा ठूलो मन्दिर छ र सबै भन्दा राम्रो संरक्षित। यो राजा सूर्यवर्मन III को लागी एक रमाइलो मन्दिर मानिन्छ, र एक हो ब्रह्माण्डको सानो आकारको प्रतिकृति जुनमा केन्द्रीय टावरले मेरुको पौराणिक पहाड प्रतिनिधित्व गर्दछ, ब्रह्माण्डको बीचमा। यो विशाल छ र तपाईं यसको हलहरू, ग्यालरीहरू, स्तम्भहरू, आँगनहरूमा र चित्रहरूमा हराउनु हुन्छ।
Angkor Thom यो खमेर साम्राज्यको अन्तिम राजधानी थियो। यो एक थियो सुदृढ शहर जहाँ अफिसरहरू, अधिकारीहरू र भिक्षुहरू बस्ने गर्थे। के काठले बनाएको कुरा समयमै टुक्रियो तर ढु stone्गाका स्मारकहरू भने बाँकी रहेका छन्: यसको पर्खाल भित्रका मन्दिरहरूका बीचमा हात्तीहरूको टेरेस, बायोन, किंग लेपर वा टेप प्रनामको टेरेसउदाहरण को लागी। त्यहाँ शाही दरबार पनि छ।
Bayon केन्द्र मा छ, दक्षिण प्रवेशद्वार बाट १ 1500०० मिटर। यो १२ औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो र आज यो घन जंगलले घेरिएको छ। यो एk्ग्कोर वाटको एक शताब्दी पछि निर्माण गरिएको थियो। टावरमा दुई हजार अनुहार ढु stone्गाले बनेको छ, हल्का मुस्कुराउँदै। यसको वरिपरि भित्ता छैन र तीन सरल स्तरहरू समावेश गर्दछ। एk्ग्कोर थोममा पनि हात्तीहरूको टेरेस छ, जसमा शासकहरू र नोकरहरूले आदेश दिएका पशुहरूका मूर्तिहरू छन्।
यदि तपाईं दक्षिण द्वारबाट प्रवेश गरेर Angor Thom भ्रमण गर्नुहुन्छ भने तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ र बाटोमा भेट्न सक्नुहुन्छ बाक्से चमक्रोंग। यस सानो मन्दिरको वास्तुकला र सजावट सुन्दर छ र यसको वरिपरि हिंड्दा तपाईं प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं उत्तरी सीढीको प्रयोग गरी केन्द्रीय अभयारण्यमा चढाई सक्नुहुनेछ जुन १० औं शताब्दीमा देखिन्छ। बान्टे साम्रे।
यो मन्दिर हो जुन बाराको of०० मिटर पूर्वमा अवस्थित छ र पूर्वबाट प्रवेश गर्न उत्तम छ। यो १२ औं शताब्दीको मध्यदेखि हो र विष्णुलाई समर्पित छ। यो Angkor मा एक सबै पूर्ण जटिल हो र धेरै राम्रो पुनर्स्थापना भएको छ यद्यपि यसको केहि रखरखाव छैन।
Preah को यो Roluos मा छ, लोले र बाकong बीच। यो नवौं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो र शिवलाई समर्पित छ। यो राजा इन्द्रवर्मन प्रथमका अभिभावकहरूको लागि एक रमाइलो मन्दिर हो, पर्खाल र धरहराहरू सहितको वर्गाकार योजना। तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, म मन्दिरको नामकरण जान सक्दछु किनकि यो विशाल छ। तसर्थ, को अद्भुत छ र मेरो विचारमा उसलाई भेट्नु अघि अघिल्लो कामको योग्य छ, अन्यथा तपाईं अद्भुत चीज हराएको जोखिम चलाउनुहुन्छ।
एउटा यात्राको लागि साइन अप गर्नुहोस्? शायद नराम्रो विचार होईन। प्रत्येक मन्दिर विशेष हुन्छ तर यो हुन सक्छ कि केही समय पछि ती सबै तपाईलाई उस्तै लाग्न सक्छ, जस्तो कि तपाई महल, संग्रहालय वा चर्चहरूमा जानुहुन्छ, यसैले केही अनुसन्धान गर्नुहोस् तपाई जानु अघि आफ्नो मनपर्नेहरू लेख्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » कम्बोडियामा अk्गकोरका मन्दिरहरू छक्क पर्छन्